Dificultades - Spanska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: dificultades (Spanska - Burmesiska)
Ella atribuye su éxitoalas dificultades que tuvo que enfrentar cuando era una niña.
ထိုအချိန်မှစ၍ ဘယ်တော့မှ သူမ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မကြည့်တော့.
ယခုမှစ၍ အဘယ်သူမျှငါ့ကို မနှောက်ရှက်စေနှင့်။ ငါ့ကိုယ်၌ သခင်ယေရှုဒဏ်ချက်ရာကို ငါဆောင် ၏။
Phogotraphy ဘလော့ဂ်က ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ၏ အခက်အခဲကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ ဘာ့ကြောင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို သုံးနေသလဲကို မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
Además deasalarios relativamente bajos, insuficientes para mantener una familia, los trabajadores enfrentan otro tipo de dificultades.
အထူးသဖြင့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်ငန်းများတွင် စီးပွားကူးသန်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခန့်မှန်းချက်အရ အလုပ်သမား ၉၀% မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး အလုပ်သမစုစုပေါင်း (၃)သိန်းနီးပါးခန့် ရှိသည်။
Allí nos comentó algunas cosas sobre la creación del blog, y también sobre las dificultades y las satisfacciones de traducir no solamente el idioma sino los contextos:
အဲ​ဒါ​တွေ​ကို အာ​ရီ​ပါ​ပေါင်မုန့်ထက် ဒေသ​ဆန်​တယ်​လို့ ယူဆ​ပေး​ကြ​ပါ။
Ali dice que si su hermano no se hubiese entregado, se habría enfrentadoadificultades al iracualquier sitio o al pasar puntos de control, ya que hay una orden de detención contra él.
သူအခုသွား၍ အဖမ်းမခံလျှင် သူခရီးသွားလာရာနှင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် သူ၌ ဖမ်းဆီးခွင့် အမိန့်စာ ရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ နေရမည်ဟု သူ၏အကိုက ပြောသည်။
Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom. Y dijeron: --Así dice tu hermano Israel: "Tú conoces todas las dificultades que nos han sobrevenido
မောရှေသည် ကာဒေရှအရပ်မှ ဧဒုံရှင်ဘုရင်ထံ သို့ သံတမန်တို့ကို စေလွှတ်၍၊ ကိုယ်တော့်ညီ ဣသရေလ က၊ အကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရသောအမှု အလုံးစုံတည်းဟူသော၊
Pues,acausa de la presente dificultad, bien me parece que al hombre le sea bueno quedarse como está
စီရင်ချက်ဟူမူကား၊ ယခု ညှဉ်းဆဲခြင်း အကြောင်းကြောင့် ခင်ပွန်းမရှိလျှင် ကောင်း၏။
လာသဲမြို့နှင့်အနီး၊ ကာလုလိမင်းအမည်ရှိသော အရပ်သို့ ရောက်ကြ၏။
ဖြောင့်မတ်သောသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ခဲသည်မှန်လျှင်၊ ဘုရားသခင်ကို မကိုးကွယ် သောသူ၊ အပြစ်ထင်ရှားသောသူသည် အဘယ်မှာပေါ်လိမ့်မည်နည်း။
Si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá
သင်သည် အမှုရောက်သောကာလ၌ စိတ်ပျက် လျှင် အားနည်း၏။
Ellos me dijeron: "El remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadasafuego.
သူတို့က၊ သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရသော လူစုထဲက လွတ်၍၊ ထိုပြည်၌ နေသောသူတို့သည် ကြီးစွာသော ဆင်းရဲခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို ခံရကြ၏။ ယေရုရှလင်မြို့ရိုးသည် ပြိုပျက်လျက်၊ မြို့တံခါးလည်း မီးလောင်၍ ကုန်ပြီဟု ပြန်ပြောကြ၏။
ထိုသို့ပြင်းစွာ ခံနေရစဉ်တွင်၊ ဝမ်းဆွဲက၊ မစိုးရိမ် နှင့်၊ သားယောက်ျားကို ရပြီဟုဆိုလေ၏။
mother church (Engelska>Latin)hebron (Tyska>Japanska)maksud teruja dalam bahasa english (Malajiska>Engelska)foot binding (Engelska>Tagalog)patvirtinamaisiais (Litauiska>Grekiska)thun (Kinesiska (förenklad)>Engelska)sinagad mo ang pasensya ko (Tagalog>Engelska)sneezing (Engelska>Swahili)meri jaan (Hindi>Tamil)i will buy (Spanska>Engelska)sometimes you might feel that i just dont care (Engelska>Tagalog)مونتيبيلّو (Arabiska>Italienska)sifflets (Franska>Kinesiska (förenklad))manjal podi (Engelska>Tamil)zerdrückt (Tyska>Franska)saya mengalami sakit tekak (Malajiska>Engelska)sakto lang (Tagalog>Engelska)machiguenga (Spanska>Engelska)consentientes (Latin>Afrikaans)thank you for all your wishes (Engelska>Tamil)meeting time call you back later (Engelska>Hindi)电子计算器 (Kinesiska (förenklad)>Grekiska)ami tomake onek bhalobashi (Bengaliska>Engelska)jeera seeds (Engelska>Tamil)chinito (Engelska>Tagalog)